AMARKA DUKAANKA GALMADA GALMADA KU RAAXEYSO DEGDEG AH DEG DEG AH
Dhamaan caruusadaha Jinsiga ku Jira ee Diyaarka U Ah Inay Ka Soo rartaan Gudaha Mareykanka
Raadi baaxaddayada caruusadaha galmada. Ku hel isla markiiba tayadayada ugu fiican aqoonta. Caruusadahaan waxaa lagu soo gaarsiiyaa maalmo yar gudahood!
Waqtiga la bixinayo ee Mareykanka 3 ilaa 5 maalmood oo shaqo.
100% Khatar la'aan.
* Qiimaha caruusadaha galmada ku jira ee halkan lagu muujiyay waa qiimaha ugu dambeeya, sicir-dhimista dalacsiinta lama adeegsan karo. Caruusadaha In-stock waxaa kaliya loo heli karaa amarada USA.
Rylan - 158cm F-Cup DL Doll Maqaarka Maqaarka Loogu Tala Galay Gabdhaha Gabdhaha waaweyn
In Stock Indhoolayaal Weyn D Cup Emma Finn Ciyaarta Casaanka Casaanka ee Casaanka TPE 141CM Da 'weyn ee Doll Sex
Maleah - 158cm DL Dolls D-Cup Maqaarka Dabeecadda ee leh Doll Love
Piper-The Doll Sex oo leh Timo Cadcad oo Dheer iyo Indho Waaweyn WM ayaa kugu Dhunkanaya Gidaarka
Markab Isla Markiiba Inuu Kujiro Bonnie - Nolosha-size Realistic 148cm Big breasted TPE Sex Doll
Setlla - In Stock California Warehouse Spot Doll Doll oo lagu raray 24 Saacadood Ilaa 52% Qiimo dhimis
Dalbo Dukaankaaga Jinsiga ah ee Dolls isla Markaaba - Ammaan iyo Badbaado!
Caruusadaha caruusada ah waxaa lagu hayaa bakhaarkayaga USA waxayna diyaar u yihiin inay soo rartaan. Qalabka caruusadaha ku jira waa hagaagsan yihiin haddii aad rabto doomo jinsi oo si xawli ah u socda oo aadan wax badan ka daryeelin u qaabeynta. Mar alla markii amarkaaga la dhigo dolladaadu waxay ku raran doontaa 1-2 maalmood oo shaqo gudahood waxayna ku imaan doontaa albaabkaaga qiyaastii 3-5 maalmood oo shaqo (USA kaliya).
Ma waxaad jeceshahay "isla markiiba caruusadaha galmada la heli karo" oo ma jeclaan lahayd inaad mid iibsato? Kadib si toos ah ugu dalbo caruusadda aad jeceshahay oo ka faa'iideyso gorgortan. Caruurtaadu ha kuu dhiibto iyada oo aan lacag lagaa qaadin ama u xafid si ay u soo qaadato, habkan iyada ah adigu waa inaad qaadataa.
15 timo oo la heli karo
Hal-gabal, nooca galinta siilka ikhtiyaar
Midabka maqaarka ee caadiga ah, indhaha madow-madow, casaanka casaanka, naasaha adag, midabka maqaarka areola, midabka maqaarka jirka hoose, timo bedel la'aan, wuu istaagi karaa;
Qalabka: Wigyada, busteyaasha, nigisyada, shanlooyinka, ulaha kuleylka, nadiifiyeyaasha.
Iibso Doll Galmo Galmo ah - Ku raaxeyso Maraakiibta Si Deg Deg Ah U Dhaqso badan!
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan kuugu soo rarno caruusaddaada galmada ee isla markiiba la heli karo, waxay ku dhici doontaa waqti aad u gaaban, maxaa yeelay dhammaanteen waxaan wada haysannaa caruusado isla markiiba yaal. Haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato caruusad jinsi ah iyo intaad wax gorgortameyso, ka dib ha u sii eegin! Boombalahaaga jinsiga ah isla markiiba waa la geyn karaa.
Halkan caruusadaha ayaa kuu soo diri kara amarkaaga wakhti kasta! Aynu dhammaanteen nabad galno, isdegno, oo aan iimaanka haysanno xilliyada wanaagsan. Tiro koobkeenna ballaadhan ayaa macaamiisheenna siinaya kala-doorashooyin kala duwan oo ka bilaabma caruusadaha aasaasiga ah illaa maalgashiga farshaxanka Waxaan ku faraxsanahay inaan kugu casuunno inaad soo booqato dukaankeenna. U adeegso gaadhigeenna wax iibsiga ee aaminka ah si aad ugu dukaamaysato kalsooni iyo badbaado.